Izay lazain'ny afisim-pifidianana ( lahatsoratra lava)
2007-09-17 @ 17:10 in Politika
Teo am-panomanana ity lahatsoratra voalohany ity indrindra aho no namorona lahatsoratra mihitsy teny antenantenany eny ka iny nampitondraiko ny lohateny hoe “Boriborintany aho boriborintany” iny. Izaho moa ao anatin’ny voatondro anarana hoe Boriborintany voalohany eto amin’ny disokrikan’Antananarivo no mipetraka. Ny lisitra eto amin’ny Boriborintany voalohany izany no ifidianako izay ho solombavambahoaka hisolo tena ahy. Lisitra sivy no hisintonana ireo olona ireo. Ireo izany no hotanisaiko tsirairay ny asehony amin’ny takela-pifidianana.
Takelaka tsy manan-daharana aloha voalohany indrindra ny an’ny ofisialy izay tsy ahitana na inona na inona mandrakariva. Ny eto Antananarivo koa angaha tsy dia mila fanazavana lava loatra intsony amin’ity resaka fifidianana ity noho ny haino aman-jery mameno tanàna. Saingy izao: Antananarivo tampontanana aza, tompoko, tsy misy afisy ny filazana ofisialy ity fifidianana ity (sa inona moa ny afisy tokony hipetraka eo?) maika fa ny any amin’ny faritra ivelan’ny renivohitra? Tsy efa tonga amin’izay ve ny fotoana hanesorana io takelaka ho an’ny ofisialy io fa tsy mba manana fahazotoana tahaka ny mpanohana kandidà tsinona ny mpiasan’ny minisiteran’ny atitany (tsy fantatro intsony koa moa hoe iza no manana andraikitra amin’io e!) hametaka afisy iray na roa isaky ny tabilaom-pifidianana.
Eto isika vao miditra amin’ny afisy mitondra ny laharana voalohany. Ny antokon’ny fitondrana no nahazo azy aloha ary ny minisitry ny angovo no lohalisitra amin’izany. Heverin’ny mpanara-baovao politika fa tsy hanetry tena ho amin’izany toerana izany na oviana na oviana rangahy io. Mifamporisika ny olona miresaka hoe jereo ny faharoa sy ny fahatelo amin’ny lisitra fa izay no tena tiany apetraka eo. Izaho kosa manao hoe tsarao amin’ny asany ireo minisitra sahy misedra vahoaka ireo fa izao no fotoana fanararaotra hanehoan’ny vahoaka izay vitany ka izay tsy lanim-bahoaka tokony hahasahy hiala amin’ny toerany fa tsy miandry esorina vao hahatsiary vasoka. Tsy maintsy hita ami’nny afisin’ny TIM (Tiako I Madagasikara) izao soratra lehibe izao miaraka amin’ny sary biletan’ny antoko atao anaty valopy harotsaka anaty vatam-pifidianana: MAP (Madagasikara Am-Perinasa fa tsy zavatra hafa tsy akory) = Faritra mandroso. Dia ho adinoina indray ve fa ny fanohanana ny MAP no narangaranga fony nanitsy ny lalampanorenana ka inona indray no amerenana ity resaka ity amin’izao fotoana izao? Fampahatsiahiva amin’ny olona angaha fa mbola mitohy ny tokony hanohanana ny MAP ka ny fifidianana ny lisitra TIM ihany no antok’izany fanohanana izany.
Ny takelaka faharoa kosa dia najaran’ny AVI (Asa vita no ifampitsarana). Solombavambahoaka talohan’ny farany teo no lohalisitra ary nanamarika azy ny fahatongavany hatrany rehefa misy ny fivorian’ny antenimierampirenena. Tsy mpikambana tao amin’ny birao anefa izy ary tsy filoha na mpitarika vaomiera tamin’ny fotoan’androny. Ny biraony anefa amin’ny andro hafa dia ilaharana mandrakariva fa tsy mba hita loatra ny fotoana hoe tsy ao izy ary izy mivantana no mandray izay mitady azy fa tsy misy mpiasa hafa loatra. Ny fitarihana ny tanora hiditra ami’nny sehatra politika no nirotsahany tamin’ny voalohany ary dia izao tsy afaka amin’ny fandraisana anjara mivantana amin’ny fandraisana andraikitra izao intsony. Tombondahiny lehibe ho azy avokoa izany rehetra izany. Efa tombatombanan’ny maro rahateo fa izy no ho mpifaninana voalohany amin’ny TIM amin’ity fari-pifidianana ity. Toy izao kosa ny soratra amin’ny afisiny ankoatra ny sarin’ireo kandidà mazava loatra:
AVI: Sahy hiady sy hiaro ny tombotsoam-bahoaka marina:
Mba tsy ho tombotsoan’olom-bitsy
Fiainana ara-tsosialy mila harenina
Hanara-maso ny rafi-panjakana mpanatanteraka ary hanolotra soso-kevitra sy vahaolana:
Hisorohana amin’ny fanjakana tsy refesi-mandidy
Ho faritra miara-mandroso ary ho Malagasy iray aina
Tena solombavambahoaka fa tsy ho mpanara-drenirano fotsiny ( fa angaha moa tsy manara-driandrano no fanoratra?):
Vonona hiatrika amin’ny tena adihevitra hahasoa ny vahoaka
Mihaino sy manaja ny hafa
Dia ireo aloha no voadikako ny amin’ity fikambanana iray ity.
Ny antoko Teza tarihin’ny mpanolotsaina politika ny filoha Ravalomanana kosa no miandraikitra ny takelaka fahatelo. Tsy fantatry ny maro loatra ny lohalisitra (sa izay moa noatao hoe olom-baovao?). Na izany na tsy izany kosa dia manan-kambara ry zareo raha jerena araka ny afisiny. Ny tarigetra lehibe moa dia miompana amin’ny hoe: Fiarahantsika anio fahombiazan’ny ampitso. Toy izao kosa raha bangoina ny lohahevitra apetrany:
Hanao antsakany sy andavany ny asa mahasolombavambahoaka
Hanampy sy hanoro lalana ny fokonolona sy ny solontenany; ireo olomboafidy ny olom-panjakana isan-tokony amin’ny fampandrosoana sy fahamahana olana.
Ny tolo-dalàna hatolotra dia baikoan’ny
Fitandroana ny fifehezan’ny firenena malagasy ny toe-kareny.
Fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana.
Fitsinjovana ny vody andro meriky ny firenena (fiahiana ara-tsosialy sy fisotroan-dronono ho an’ny beantitra tsy ankanavaka).
Nisy namana iray izay moa niteny fa sambany sambany vao nahita eritreritra avy amina kandidà na antoko mhevitra ny benatitra tahaka izao amin’ity fifidianana ho avy ity. Raha mba hevitra tokoa moa no fepetra tokana ifidianan’ny olona amin’ny alahady izao?
Olona tsy miankina mitondra any anarana hoe “feon’ny fahendrena” (eto Antananarivo moa misy radio silamo izay mitondra io anarana io fa ny fifandraisan’izy roa ireto no tsy fantatro loatra na misy na tsia?) no manana anjara amin’ny takelaka fahaefatra. Olona tsy fantatra loatra raha jerena amin’ny anarana sy ny asany izay dokotera fa tahatahaka ireny fantatra ireny kosa raha jerena endrika (Ny Malagasy ve moa tsy fantapantatra ihany hoe Malagasy io?). ny olona iray mametraka ny afisiny amin’ny rindri-tranony no nohatoniko ka nanontaniako ny mombamomba azy. Tahaka ny mahafantatra tsy mahafantatra izany ramatoa io.Monina any akaiky ny vatobe hoe izy (izay mpandeha fiara fitateran’olona mnkany Ivato Seranana dia mahafantatra izany toerana izany tsara). Lazainy ihany koa mpanampy ny olona rehefa tonga ny voina mpitranga amin’ny ambany tanàna. Izay no mba fantany dia mba ampitaiko etoana. Manaraka izany dia izao koa ny soratra manaraka ny afisiny:
Olombaovao tsy natolotry ny antoko politika
Tsy manavaka saranga
Izany hoe raha fehezina dia te hisintona ny vaton’izay mahafantatra azy izy. Saingy ny lesoka lehibe kosa dia izao: Ny laza ratsy no miely haingna kokoa noho ny laza tsara ka raha malaza tsara ianao dia ela izany vao hipaka amin’ny maro afa-tsy hoe tena goavana be nahasehaka ny firenena manontolo izay nataonao no sady manana haino aman-jery ianao hiantsoantsoana izany. Noho izany tsy manam-potoana ahafahana manadihady loatra ny aminao ny mpifidy maro.
Ny antoko manaraka indray dia ny Antoko Miombon’Ezaka izay afohezina amin’ny anarana hoe AME. Antoko noforonin’ny Jeneraly Ramakavelo nefa voatery nialany rehefa betsaka ny avy ao amin’ny antoko AKFM Fanavaozana no nisintaka tamin’ny antokony taloha fony tsy sahy nanohana ny filoha ankehitriny io antoko io. Ankehitriny moa dia Atoa Ravalison Clément, kandida ho ben’ny tanànan’ny Fanavaozana teto Antananarivo tamin’ny fifidianana ho Ben’ny tanàna Antananarivo ny taona 1999 no mpitarika. Ny lohahevitra napetrany dia hoe fahamendrehana, fitsinjovana ny mahaolona, fiarovana ny soa iombonana, fanetsehana ny asa fampandrosoana. Ny afisy kely kosa dia mametraka fa hanefa ny tatitra amin’ny vahoaka, hiserasera sy hifampidinika amin’ny vahoaka, hanampy sy handroso vahaolana amin’ireo sefom-pokontany, hanentana ny mpiara-belona sy ny mpiombona antoka, hivoy sy hanapariaka ny kolontsainan’ny fandrosoana ary hitaiza sy hanabe ny tanora ireo kandidany raha izy ireo no lanim-bahoaka.
Ny antoko manaraka kosa indray dia ny Grad Iloafo izay mametraka ny tarigetra hoe: “Asio dikany ny safidinao” miaraka amin’ny sarin’ireo hirotsaka kandidà no hany hita. Dia tena tsy hitako ihany koa izay ambara miaraka amin’izany fa Atoa Ratbetsitonta Tovonanahary, minisitra tamin’ny fitondran’ny Profesora Zafy, no filoha mpanorina azy. Antoko miaraka amin’ny fitondrana, sahala amin’ny Teza ihany koa fa nandrotsaka depiote ho azy manokana kosa. Niezaka ity antoko ity mba hahasehaka an’Antananarivo renivohitra farafaharatsiny. Mifanahatahaka amin’izany ihany koa ny lisitra Arema izay aorian’ny vondron’ny mpitsara soratako eo ambany io. Ny sarin’ny sekretera nasionalin’ny Arema elatra Pierrot Rajaonarivelo miampy ny sarin’ny bileta mena misy sary kintana fotsy ary ny soratra hiaro ny tombotsoanao sy hitondra marina ny hetahetanao ihany no hita aminy ka mihanahana tanteraka aho amin’izay fanazavana tokony hatao. Ry zareo aza ve moa tsy misy fanazavana loatra ka izaho indray no hitady inona eo?
Dia manaraka kosa ny Sendika Mpiasa Miray Feo izay ny sendikan’ny mpitsara nanao fitokonana lavabe taoriana kely fotsiny nitondran-dRavalomanana no tena mahazo vahana ao anatiny. Izany hoe mpitsara roa no roa lohalisitra amin’ity vondronoa nandrotsaka olona hofidiana ity. Ny voamarika dia toa misy vondrona roa samihafa ihany mikarakara ny zavatra soratana. Ny ilazako izany dia misy afisy be loatra ny teny malagasy diso voasoratra ao anatiny nefa misy ihany koa ny lahatsoratra tena voasoratra amin’ny teny malagasy tsara. Ny foto-kevitra najoro moa dia miompana amin’ny fanoratana fa tsy misy olona ambonin’ny lalàna ary ny lalàna tsara dia mifanaraka amin’ny hetahetam-bahoaka no ahazoana fiaraha-monina mirindra. Dia ambara koa manaraka izany fa tsy zoviana (nitarika fitokonana ve tsy ho fantatra?) ireo mpikambana nilatsaka hofidiana. Mitaky ny fifandanjam-pahefana ihany koa ry zareo ary mikendry ny fananganana tan-dalàna izay mahatonga ny mpitondra sy ny entina ho voafehin’ny fitsipi-dalàna mitovy eo ambany fanaraha-mason’ny Fitsarana Mahaleotena.
Ny vondrona fahasivy farany holazaina anao etoana dia ny ALDR na “Alliance Liberal-Démocrate pour la Regionalisation” ary adikany amin’ny hoe Miara-mirindra ao anatin’ny Demokrasia mampandroso ny faritra. Ny tarigetra indray moa dia hoe Samymaranitra amin’izay tandrify azy. Ny hataony moa dia hoe manangana lalam-bola sy lalam-barotra vaovao hampitombo ny fihariana ary atao lanja miakatra ny fidiram-bolan’ny tsirairay miatrika ny vidim-piainana amin’ny alalan’ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana. Tsy dia fantatro loatra ny ankoatra izay apetany amin’ny afisy. Dia izay sy izay aloha ny hita any amin’ny afisy isy ny fari-pifidianana misy ahy ry zareo mba hahitanareo ny zava-misy eto Madagasikara eto.